« Fo mangadihady Nitiah Nosy. | «Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← « Ho aiza ialahy ry gasy ? », Nary (Mamitiana Randrianarison).
Affaire Mathieu Rajaonarimampianina. Intervention du président Hery (le papa). Tsy re maty tsy hita velona i Mandignisoa. Pas de cadavre ! →
« Fo mangadihady » Nitiah Nosy.
Nanakoako ny feon’ny famoha-mandry efa namboarina haneno amin’ny 4 ora maraina. Niantsamboatra izy, mbola didy maso, nanezaka nikosoka ireto maso roa baribary, toa dobo mangatsakatsaka, na dia mbola jembin-tory aza.
Reny toa nihamafy ny fidoboky ny fony raha mby tao an-tsainy tampoka ny antony tsy maintsy nialany am-pandriana amin’ity andro vao mazava ratsy ity.
Somary nanarangarana ny tany ivelany izy; teo amin’ny makakakakan’ny varavaran-kely hazo tao an’efi-tranony. Mbola maimaizina ny any ivelany any, sina ny tontolo. Feon-tsahona irery ihany no re eny an-tsefantsefany eny.
Noraisiny ilay fitoeran-drano mitana hafanana ka namboariny ny « dite », mba handemana ity tapa-mofo efa natao am-ponosana ny omaly hariva. Iny no mba ody ambavafo hiatrehany ity andro anio ity. Lavitra mantsy ny dia anio; Toamasina no toerana hitodiana. Rehefa avy nisaika izy dia noraisiny indray ireto fitafiana, efa voapasoka, fa navela hitsotra teo an-damosin’ilay seza hany tokana tao aminy.
Nisonenika izay tsy izy niomana. Noraotina ny volo, « atao ahoana no fibango ity? », hoy izy sahiran-tsaina. Andro lehibe mantsy ny anio… Tapaka ny heviny fa atao bango tokana ary somary asiana sanga . Nolokoiny somary mavokely matsatso koa ireto molotra manify « maha-te hanaikitra » hoy ny lehilahy mpananihany.
Tsy tapitapitr’izay, io izy efa tafavoaka teny alatrano rehefa injao nandefa ny famantarana ilay mpamily fiara karetsaka efa nafarany haka azy. Tsy maintsy manainga mialoha mantsy fa mbola lavidavitra ihany Ambodivona misy ny toeram-piantsonana.
Tamin’ny enina ora sy sasany mahery dimy minitra no tonga teny Izy. Nafatotra ny entana ary avy eo raikitra ny fiantsona ny anaran’ireo mpandeha. Tsy roso anefa ny dia raha tsy tamin’ny valo ora latsaka fahefany satria misy ireo mpandeha tara fahatongavana.
Niantsamboatra niaraka tamin’ny firaondraonan’ny maoteran’ny fiara hanainga ny fo tao anatiny tao.
FO MANGADIHADY-Fiz. 2
Faly ve? Manahy ve? Faly izy, toa tsindrin-daona, maikamaika, tsy nahandry…. Teny andàlana teny dia nisafotofoto izato eritreriny. Nitamberina teo daholo ny tantara teo aloha, ny antony nahatonga azy tato anatin’ity fiara ity ka hanjohy an’i Toamasina. Indreo endrik’olona roa samihafa no nanalokaloka ny sainy. Ilay iray voalohany toa ankahalainy mafy nefa toa mbola reny misy fitiavana azy tavela ihany tao ampony tao; ilay faharoa toa nampitempo haingana ny fony ary toa nampitsiry indray ny fanantenana tao anatiny. Enim-bolana no nifaneraserany tamin’ity “endrika faharoa”, tamin’ny alàlan’ny aterineto ihany nefa. Tamin’io tokoa mantsy no mba nahalalany azy fony izy trotraky ny famoizam-po raha nilaozan’ilay mba notiaviny ary natokisany “ilay endrika voalohany” io. Nahita ny akanga tsara soratra e!! Atao ahoana moa tsy azo terena ny fitiavana! Tsaroany teo koa ilay fotoana voalohany nifankahalalany tamin’ity ity sakaizany vaovao (ilay endrika faharoa).
Tamin’ny alàlan’ny aterineto ihany nefa; satria valovotaka any Toamasina ity farany. Tonga dia babo izy tamin’io. « Kanto e »!! izay no azony hamehezana azy: « endrika marirandrirana, maranidranitr’orona, malefadefaka fijery ary zarazara fihodirana ». Izany rehetra izany haingoan’izato “feo” mandrotsirotsy feno tambitamby sy feno fitiavana, ka dia natokisany avy hatrany. “Olona tsotra”, hoy izy satria tokoa mantsy : « arakara-tarehy voa-javatra »!! Resim-pitia tanteraka ny anao vavy ary toa torak’izany koa ny lahy.
Nifankazatra teny, nifankatia na dia tsy mbola nihaona mivantana aza. Matetika ho isan’andro no mifankahita amin’ny aterineto; mifandefa hafatra ary mifampiantso amin’ny alàlan’ny finday efa ho im-polo kely. Dia lafatra e! Toy ny hoe olona efa nihaona sy niara-nipetraka ela! Nitsiry tao anatiny indray ny fanantenana izay efa rava teo, nanakom-pery koa ilay fo voaratra teo aloha. Ary tsy nisy intsony fotoana nanembonany ilay mpisompatra saika handatsak’aina.
Tsy adinony akory fa tsapany hoe sitran’ity fitiavana vaovao miredareda ilay fony naratra teo.Tsy naharitra izy indray andro ka namosa-kevitra fa mety raha mba mihaona amin’izay. Tsy nandà koa ilay malalany. Dia raikitra izany fa any Toamasina no hiaona voalohany .
Taitra tampoka tamin’izato fahatsiarovana izy, tsy tandritandriny akory fa hay efa eto Antsampanana sahady. « Ora iray sisa! » hoy ny teny nivoaka moramora teo imolony; ora iray tokoa sisa dia ho eny an-tratran’ilay olon-tiany izy , hisambarany indray fitiavana vaovao ary hanonerany ny rehetra tsy vita hatrizay. Mila hitroatra tao an-tratrany tao ny fony raha nisaina izany. Natopiny ny manodidina ny masony fa toa miara-paly taminy ireto zavaboary eny an-tsisin-dàlana. Ny masoandro koa iry mibaliaka mahafinaritra ery, toa manambara sahady fa fiainana hafa indray, feno fahasambarana no miandry azy aty.
Raha vao injay tsapany manafosafo ny tavany ny rivo-dranomasina dia tsapany nientanentana ny vatany iray manontolo, nihamafy fidoboka indray ny fony: « kely sisa! » hoy izy ningonongonona sady nitsiky.
FO MANGADIHADY – Fiz.3 Farany
Raha mbola samy revo miandry ny entana hampidinina ny mpandeha rehetra, izy kosa tsy mahatombina, miherikerika, miezaka mitadidy ny totalin’endrik’ilay tiany, izay tokony hitsena azy eto.
Tafidina daholo ny entana, lasa tsikelikely koa ny mpandeha…
Donafan’ny hainandro teo izy ka roso namonjy alokaloka. Niandry, niandry… Nientanentam-po, Adinony fa efa ora roa izay no dila tamin’ilay fotoana nifanomezana. Teo vao tonga tampoka tao an-tsainy : « Maninona tokoa moa raha antsoina amin’ny findainy? » « Tsy miasa intsony io nomerao io tompoko! »… Niontana ny fony, maina ny ati-vava, kendakenda izany ary nanotika ny kibo… Naverina ny antso: indroa, in-telo; … im-polo… niverimberina ihany ilay hafatra fa efa tsy miasa intsony io nomerao io.
Kivy izy. Farany lasa nanatona ireny toerana hahafahana manao aterineto ireny. Nosokafana ny “fesoboky”.. Akory ny hatairany fa tsy hitany tao intsony ilay olona saika halehany taty. “Aucun résultat pour votre recherche.”, izay no hafatra miverimberina hitany tao, rehefa avy nanandramana imbetsaka ! Niondrika izy, nijohy ny ranomasony… » Voafitaka indray! »; hoy ny menomenony. Nitsaitsaika moramora nandao ilay toerana.
Hany hery dia nandeha nijery fiara indray ary hitodi-doha any Antananarivo anio hariva ihany no faniriany.
« Efa feno daholo ny toerana”, hoy ilay tompon’andraikitra nandray azy teo.
“Tsy maintsy hiakatra anio hariva angaha ianao?”, hoy indray ity farany. Nihatokatoka fotsiny izy.
Misy fiara hitondra ny fianakavianay mantsy hiainga anio amin’ny 8ora sy sasany alina, mbola malalaka, ka raha mety aminao…”; tsy tapitra akory ny tenin’ilay miresaka aminy dia: “Eny !”, hoy izy, tsy nanisy olana. Dia raikitra ary fa hiaraka hiakatra amin’ireto olona ireto izy, ary amin’ny 8ora alina ny fotoana…
Tsaroany tampoka teo fa hay moa aty Toamasina izy…
Noraisiny ny entany ka iny izy namindra moramora nanjohy ny moron-dranomasina. Nony mby teny dia namonjy nipetraka nandinika iny fara-vodilanitra iny. « Raha mba teto mantsy ianao.. » hoy ny sentony, ary nijohy indray ny ranomasony, ka namonto tanteraka ny tavany. Raha iny mbola jembin’ny tomany iny izy dia nisy tovolahy iray nahatsikaritra izato fahoriany.
« Hono ho’aho ramatoa kely mahafatifaty, ‘ndrao re mba misy azoko hanampiana anao? » Nitraka tampoka izy, akory ny hatairany: endrey ny hatsaran’ity tovolahy eto anoloany! « Tsia, tsia … » hoy izy tany an-tsainy, na dia tsapany fa toa te-hiantsampy mafy eny amin’ity olona tsy fantany izy, ka higogogogo hanala ny fony…
« Andry no anarako, inona ho’aho no mba azoko atao hanampiana anao? » « Ndao re mba ho entiko hiaraka hiala hetaheta amiko ianao e! » Tsy namaly izy… Reny nidoboka indray ny fony. Tsy toy ilay fidoboky ny fo raha “tia” nefa fa toa fidoboka feno fankahalana, feno hatezerana… « Tsia an! tsia an! Aoka izay… Mpamitaka daholo! », izany no niverimberina tao an-tsainy tao anatin’iny minitra fohy iny. Tsy nisy na teny iray aza mba nivoaka ny vavany fa dia nomeny lamosina ilay tovolahy. Ary afaka minitra vitsivitsy dia noraisiny indray ny entany ka nirintona izy…
Tonga ilay ora handaozany an’i Toamasina, Toamasina saika mba hitsirian’ny fanantenany vaovao; indrisy nefa fa famoizam-po indray no niandry azy taty.
Teny ambony fiara dia nisafotofoto indray ny saina aman’eritreriny. Mila olona izy, izay no nahatsapany ny tenany. Eny fa na dia namana fotsiny aza, afaka mba hizarany ity fahoriana mafy mila tsy ho zakany ity. Teo indrindra dia nitsipalotra tampoka tany amin’ilay endrika nifanojo taminy tery amoron-dranomasina ny sainy. Nisento izy.. Tara loatra … Latsa-dranomaso indray… Nakorisany moramora tao anatin’ny paosin’ilay akanjo bà nanaovany ny tanany, hikaroka mosoara … Voarainy niaraka tao sila-taratasy… NIDOBOKA INDRAY NY FONY raha namaky izay voasoratra tao: « Andry ilay teny amoron-dranomasina … Ary niampy nomerao finday”….
Nitiah Nosy 19/05/15 15:49
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Nitiah Nosy. Ajoutez ce permalien à vos favoris.